Madaxweyne Siilaanyo safar ugu anbabaxay dalka Isku-taga Imaaraadka Carabta | Lughaya.Com
Madaxweyne Siilaanyo safar ugu anbabaxay dalka Isku-taga Imaaraadka Carabta
Added by Adal on June 16, 2017.
LUGHAYA.COM Madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa maanta safar ugu anbabaxay dalka Imaaraadka Carabta oo la sheegay inuu muddo dhawr cisho ah joogi doonno.
Madaxweynuhu markii uu Madaarka Hargeysa ka dhoofayey warbaahinta lama hadal, hasse ahaatee afhayeenka madaxweynaha Xusseen Deyr ayaa warbaahinta u sheegay in safarkan madaxweynuhu yahay mid gaar ah oo madaxweynaha u gaar ah balse aanu ahayn safar shaqo oo uu hawlo Qaran la xiriira.
“Madaxweynaha Somaliland waxaa uu maanta u baxay dalka Imaaraad Carabta wuxuuna ahaa safar khaas ah oo aan ahayna mid shaqo, muddana wuu ku maqnaanayaa, mudadda uu halkaasi joogo wixii shaqo ah ee Qaranku leeyahay ee la soo gudboonaada awalba siddii uu u qaban jiray buu u qabanayaa”ayuu yiri Xusseen Dayr oo ka hadlayey safarka madaxweynaha.
Safarka madaxweynaha waxa ku wehelinayey marwadiisa Aamino Waris, wasiirka Maaliyadda Samsam Cabdi Aadan iyo xoghayaha gaar ah ee madaxweynaha Cali Axmed Cali.
Khilaafka ka jira wadamada Khaliijka waxay Somaliland taageertay Sucuudiga iyo Imaraadka Carabta, waxaana dadka siyaasadda falanqeeya xusayaan in safarkan madaxweynuhu xidhiidh la leeyahay taageeradda ay u muujiyeen Imaaraadka Carabta ee ay kaga soo horjeedaan dawladda Qadar.
Dhinaca kale, xisbiga mucaaradka ah ee WADDANI oo isagu markii hore ka soo horjeestay go;aanka xukuumaddu qaadatay ayaa ka noqday go’aankiisii hore, waxaanu taageeray go’aankii xukuumaddu qaatay waxaanay sheegeen in ay u daba fadhiisanayaan xukuumadda arrimahan oo kale, inkastoo ku cawdeen in ay ahayd in lala tashaddo marka go’aan arimaha qaran saamayn ku leh la gaadhayo